R/Wasaare ku xigeenka XFS oo lagu soo dhaweeyey Addis-Ababa | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA R/Wasaare ku xigeenka XFS oo lagu soo dhaweeyey Addis-Ababa
R/Wasaare ku xigeenka XFS oo lagu soo dhaweeyey Addis-Ababa
Adis-Ababa(SONNA) Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya.
Wafdiga Ra’iisul Wasaare ku xigeenka waxaa halkaas ku soo dhaweeyey Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Dalkaasi Itoobiya Maxamed Cali Nuur, masuuliyiin iyo diblomaasiyiin ka tirsan Dawladda Ethiopia.
Ujeedada socdaalka Wafdiga Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa la xiriirta ka qeybgalka munaasabada xuska 12aad ee 29ka Hidhaar maalinta Qowmiyadaha dalkaas Itoobiya oo maalinta bari ah ka qabsoomi doonta xarunta dawlad deegaanka canfarta ee magaalada samara.
Waxaa lafilayaa in ay halkaasi khudbado ka jeediyaan madax kaladuwan oo ka qeybgalaysa,iyadoo lafilayo in ku xigeenka raiisul Wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed(Qadar) uu halkaas ka jeediyo uu kaga hadlidoona ahmiyadda munaasabadda iyo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Sidoo kale Mudane Mahdi Maxamed guuleed Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya inta uu joogo dalka Itoobiya waxuu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda dalkaas, iyagoo ka wada hadlaya xiriirka, iskaashiga iyo arrimo kale oo muhiim u ah labada dawladood.
Previous articleAqalka Cad ee Mareykanka oo ka digay in la baajiyo kulanka Mike Pence iyo Maxamuud Cabaas
Next articleAqalka cad ee Maraykanka oo ku kala qaybsan arrinta Quddus